VACC3000 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်ကို တစ်နာရီတွင် ၃၀၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်နံပါတ် ၂၅၀၉၆၉ တရားဝင်လက်မှတ်ရရှိထားပါတယ်။
မော်ဒယ်- VACC 3000
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: VACC3000
VACC3000 Purified water filtration system is designed with an improved industrial compact design.
VACC3000 ရေသန့်စစ်ထုတ်စနစ်ကို တိုးတက်တဲ့ စက်ရုံသုံး သိပ်သည်းတဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ့ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။
Members of Viet An Company Viet An မှ အဖွဲ့ဝင်များ
The product can be used for various purposes, including water filtration in the buildings, shopping centers, restaurants or in the bottled water factories.
ဒီပစ္စည်းကို အဆောက်အအုံများ၊ ရှော့ပင်းစင်တာများ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ရေဘူးစက်ရုံများအပါအဝင် ရည်ရွယ်ချက်များစွာနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
With this water filtration system, you will not have to worry about water quality.
ဒီရေစစ်ထုတ်စနစ်ကြောင့် ရေရဲ့ အရည်အသွေးကို စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။
If you are looking forahigh capacity water filtration system, please takealook at this VACC3000 3,000LPH bottled water filtration line which is directly imported and distributed by Viet An.
လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမြင့်မားတဲ့ ရေစစ်ထုတ်စနစ်ကို ရှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ Viet An မှ တင်ပို့ဖြန့်ချီတဲ့ VACC3000 3000 LPH ရေစစ်ထုတ်စနစ်ကို အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
The machine is produced in compliance with ISO 9001:2015 standard and genuine, high-quality material components. This helps to increase the lifespan of the machine to more than 15 years.
ဒီစက်ကို စစ်မှန်ပြီး အရည်အသွေးမြင့်မားတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပြီး ISO 9001:2015 စံချိန်စံညွှန်းနဲ့အညီ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၁၅ နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အထိ ကြာရှည်ခံပါတယ်။
With 20 years of experience in supplying water treatment solutions and water filtration systems of the USApec brand, we are confident to satisfy your diverse demands.
USApec ကုန်ပစ္စည်းတံဆိပ်နဲ့ ရေပြုပြင်စစ်ထုတ်ကိရိယာာတွေကို ပေးပို့တဲ့ နှစ် ၂၀ ကျော် အတွေ့အကြုံကြောင့် ကျွန်တော်တို့က လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ ယုံကြည်မှုရှိပါတယ်။
What kind of business model does the VACC3000 Purified water filtration system suitable for?
VACC3000 ရေသန့်စစ်ထုတ်ကိရိယာက ဘယ်လို စီးပွါးရေးတွေအတွက် သင့်တော်လဲ?
- With an hourly capacity pf 3,000L/hour, the ACC3000 Purified water filtration system is suitable for the bottled water filtration system manufacturers which have the demands to upgrade the manufacturing technology as well as purified water quality.
-တစ်နာရီမှာ ၃၀၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကြောင့် ACC3000 ရေသန့်စစ်ထုတ်စနစ်က ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ ရေသန့်အရည်အသွေးကို အဆင့်မြှင့်တင်ချင်တဲ့ ရေသန့်ဘူးကုမ္ပဏီတွေအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။
- In addition, the apartments, high buildings, restaurants, hotels, or big resorts are also typical business models.
-ဒါ့အပြင် တိုက်ခန်းတွေ၊ အဆောက်အအုံမြင့်တွေ၊ စားသောက်ဆိုင်တွေ၊ ဟိုတယ်တွေ၊ အပန်းဖြေစရာနေရာတွေအတွက်လည်း အသုံးပြုဖို့ သင့်တော်ပါတယ်။
- The cube ice manufacturers and electrolyte water plants can also consider this machine.
-ရေခဲထုတ်လုပ်သူများ၊ လျှပ်လိုက်ရေ ထုတ်စက်ရုံတွေက ဒီစက်ကို စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
What are the outstanding features of the ACC3000 Purified water filtration system?
ACC3000 ရေသန့်စစ်ထုတ် ကိရိယာရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ လက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ?
ကြာရှည်သော ထားသိုနိုင်သည့် သက်တမ်း
The components are mainly genuine equipment with clear origin. They are mostly directly imported from the USA, UK, Italy, Japan, Korea. Thus, it can maximumly save the expenses and increase shelf life for the machine to more than 15 years.
အစိတ်အပိုင်းတွေအားလုံးက စစ်မှန်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကို USA UK အီတလီ ဂျပန် ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေကနေ တင်ပို့ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကုန်ကျစရိတ်တွေကို လျှော့ချနိုင်သလို စက်ရဲ့ ထားသိုနိုင်မှုသက်တမ်းက ၁၅ နှစ်ကျော်ပါတယ်။
This machine costs only 239 million dongs. This price is reasonable and affordable for many manufacturers and individuals. It can be used to treat various water sources, including tap water, well water, groundwater.
ဒီစက်က ဗီယက်နမ်ငွေ ၂၃၉ သန်းသာ ကျသင့်ပါတယ်။ ထုတ်လုပ်သူတွေအများဆုံးအတွက် သင့်တော်ပြီး တတ်နိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစက်ကို ဘုံပိုင်ရေ၊ တွင်းရေ၊ မြေအောက်ရေ စတဲ့ ရေအရင်းအမြစ် မျိုးစုံကို ပြုပြင်ဖို့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
The machine hasacompact design, making it easy to clean and absolutely safe. The composite material makes it resistant to saltwater and brackish water. Therefore, the machine is suitable for water treatment in coastal areas, rural areas with long shelf life.
ဒီစက်မှာ သန့်ရှင်းရလွယ်ပြီး လုံခြုံစေဖို့ သိပ်သည်းတဲ့ ဒီဇိုင်းရှိပါတယ်။ ဒီစက်မှာ ပါဝင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို ရေငန်၊ ပင်လယ်ရေတွေကို ခုခံနိုင်အောင် ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီစက်ကို ကျွန်းတွေ၊ ကျေးရွာတွေမှာ ကြာရှည်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
With the application of RO and nanoe technology, the machine can be used for water filtration to turn the water of different intakes into pure water, meeting health safety standards.
RO နဲ့ nanoe နည်းပညာအပလီကေးရှင်းကြောင့် ဒီစက်ကို ရေအမျိုးမျိုကို ရေသန့်ဖြစ်အောင်စစ်ထုတ်ပြီး ကျန်းမာရေးစံချိန်စံနှုန်းတွေနဲ့ ညီစေပါတယ်။
Closed filtration process
The filtration process is totally closed and automatic witharaw filtration system,aheavy metal filtration system, detoxification, decontamination, and deodorizing filtration system,adouble bactericidal system and bacteria filter using Ozone machine and UV lamp. This helps to ensure the quality of the filtered water, satisfying QCVN 6-1: 2010/BYT standard.
ရေစိမ်းစစ်ထုတ်စနစ်၊ ကြီးမားသော သတ္တုများစစ်ထုတ်ကိရိယာ၊ ပိုးမွှားအနံ့အသက်များ စစ်ထုတ်ကိရိယာ၊ ဘက်တီးရီးယား နှစ်ဆ စစ်ထုတ်ကိရိယာ၊ အိုဇုမ်းကို အသုံးပြုပြီးဘက်တီးရီးယား စစ်ထုတ်ကိရိယာ၊ UV အလင်းရောင်တွေနဲ့ အတူ ဒီစက်က ကောင်းမွန်ပြီး အော်တိုလုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ဒီစက်က စစ်ထုတ်ထားတဲ့ ရေတွေကို QCVN 6-1: 2010/BYT စံနှုန်းနဲ့ ကိုက်ညီစေပါတယ်။
Easy to integrate with other equipment
The product comes witha3000L/h water filtration line which isasemi-automatic, automatic purified water filling machine system. This helps to make the water filling process quick and accurate, ensuring food safety and hygiene standards.
အခြားစက်နဲ့ လွယ်ကူစွာ ပေါင်းစပ်နိုင်ခြင်း
ဒီစက်က တစ်နာရီမှာ ၃၀၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပြီး တစ်ဝက်အော်တိုစနစ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစက်က ရေလောင်းဖြည့်ပေးတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကို လျင်မြန်တိကျစေပြီး အစားအသောက် စံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့ ညီစေပါတယ်။
For Viet An. We always put the customers’ trust and benefits first. We try to accomplish this by providing our customers with the best services. Thus, for all the customers choosing our products, we will apply totally free shipping-installation nationwide.
Viet An မှ ဝယ်ယူသူတွေရဲ့ ယုံကြည်မှုနဲ့ အကျိုးအမြတ်ကို အလေးထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ဝယ်ယူသူတွေကို အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးပြီး ဖြည့်ဆည်းပေးနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဆီက ဝယ်ယူသူတွေကို နိုင်ငံအနှံ့ အခမဲ့ ပို့ဆောင်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Warranty: 12 years:
VACC3000awarranty period of 12 years and lifelong maintenance. Besides, we also offer services of changing the filter components at the best prices.
VACC3000 စက်က ၁၂ နှစ်အာမခံချက်ရှိပြီး တစ်သက်တာ ထိန်းသိမ်းမှုပေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကျွန်တော်တို့က ပါဝင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေအားလုံးကိုလည်း ချိန်းပေးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပေးပါတယ်။
Free consultation on factory design
We offer free consultation on factory design for the customers so that they can install the filtration system with the best space-saving and ensure strict quality standards.
စက်ရုံဒီဇိုင်းကို အခမဲ့ ဆွေးနွေးပေးခြင်း
ဝယ်ယူသူတွေအနေနဲ့ စစ်ထုတ်ကိရိယာကို နေရာအများကြီးမလိုဘဲ အရည်အသွေးစံနှုန်းတွေ သေချာစွာ တပ်ဆင်နိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့က အခမဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါတယ်။
Big incentives for the customers purchasing VA’s products for the next time
ဝယ်ယူသူတွေအနေနဲ့ နောက်ထပ်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူတဲ့အခါ ရမယ့် ကြီးမားသော ဆွဲဆောင်မှု
After buying this product, if you have demands to buy additional products from us, you will be offeredadiscount of 5-10%.
ဒီစက်ကို ဝယ်ယူပြီး အခြားပစ္စည်းတွေ ဝယ်ယူချင်သေးတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က ၅-၁၀% ဒစ်စကောင့် ပေးပါတယ်။
If you want to buy additional water filtration systems with other capacities, please go to https://vietan.vn/day-chuyen-loc-nuoc where you can see detailed information on prices and technical information. Call us now at 0949 414141 if you have any inquiries or visit us directly at our branches nationwide. We are pleased to serve you!
တကယ်လို့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း မတူညီတဲ့ စက်တွေကို ဝယ်ယူချင်တယ်ဆိုရင် https://vietan.vn/day-chuyen-loc-nuoc တွင် ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ စုံစမ်းမေးမြန်းစရာရှိရင် ၀၉-၄၉ ၄၁၄၁၄၁ ကိုဆက်သွယ်နိုင်သလို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရုံးခွဲတွေကိုလည်း လာရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ အဆင်သင့်ပါပဲ။
2 Air disinfection lamp လေပိုးသတ်ထားသောမီးအိမ်4pc VA/ USApec
3 Air disinfection lamp hanger လေပိုးသတ်ထားသောမီးအိမ်ထည့်ထားသည့်ရုံ4pc VA/ USApec
28 Bacterial filter Cartridge ဘက်တီးရီးယား စစ်ထုတ်ကိရိယာတောင့်3pc VA/ USApec
Hỏi đáp & đánh giá VACC 3000 3000LPH ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်